Wararkii ugu dambeeyay dagaalka gobolka Mudug | KEYDMEDIA ONLINE
Madaxweyne Qoor-Qoor ayaa booqasho ugu tagey Ciidamada kadib markii ay la wareegaay Qaycad oo Al-Shabaab mudo sanado gacanta ku haysay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dagaal xoog leh oo u dhaxeeya Ciidamada dowladda kuwa Galmudug oo isku dhinac ah iyo Al-Shabaab ayaa ka socda degaanno katirsan gobolka Mudug, ee bartamaha Soomaaliya.
Duqeymo dhanka cirka ah oo Mareykanka ku taageerayo Ciidamada dhulka ka dagaalamaya ayaa barbar socda howlgalka militeri ee Mudug kaasoo noqonaya midkii ugu weynaa tan iyo doorashadii Qoor-Qoor.
Wararkii ugu dambeeyay ee Keydmedia Online ka helayso Saraakiisha Ciidanka ayaa sheegaya in Maanta ay weerar ku qaadeen Tuulooyinka Eryaalle iyo Miroon, oo dhaca duleedka degaanka Qaycad oo maalmo kahor laga saarey Al-Shabaab.
Wasiirka Amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in guulo waaweyn ay ka gaareen dagaalka socda, isagoo xusay inay maalmaha soo socda ay soo afjari doonaan joogitaanka Al-Shabaab ee gobolka Mudug.
Ciidanka DANAB ee Mareykanka uu tababaray ayaa qeyb ka ah dagaalka, waxaana lagu soo waramayaa in dagaalyahanada Al-Shabaab ay ka carareen dhowr Tuulo kadib markii ay iska caabin waayeen duulaan lagu soo qaadey, oo la socdaan duqeymo diyaaradaha Mareykanka u geysanayaan.
Diyaaradaha Drones-ka Mareykanka ayaa labo duqeyn ka fuliyay inta u dhaxaysay Qaycad iyo Bacaadweyne afartii maalmood ee lasoo dhaafay, waxayna dowladda Soomaaliya sheegtay in lagu dilay howlgallada cirka ugu yaraan 50 Al-Shabaab katirsanaa, oo ajnabi ay ku jiraan.
Howlgalka Mudug ayaa billowday kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadey saldhiga Wisil bishii lasoo dhaafay, halkaasoo lagu dilay askar iyo taliyeyaashooda, waxaana weerarkaasi kiciyay carada Galmudug iyo dowladda oo qaadey duulaan culus oo illaa hadda socda.
0 Comments Topics: al-shabaab galmudug mudug soomaaliya